लामो समयदेखि अवरुद्ध एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा - Hamrokhotang
Home » News » लामो समयदेखि अवरुद्ध एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा
लामो समयदेखि अवरुद्ध एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा
बैशाख–२८, विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेपछि बिगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जिल्ला अस्पताल खोटाङको एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० केभीएको विद्युत ट्रान्सफरमर जडान गरिदिएपछि बिगत दुई वर्षदेखि बन्द रहेको एक्स–रे मेसिन हालै सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
मेसिन सञ्चालनमा आएसँगै अहिले दैनिक ४०÷५० जना बिरामीले एक्स–रे सेवा लिन थालेका अस्पतालका प्रमुख डाक्टर माधव लम्सालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि विद्युत अभावमा मेसिन चलाउन नसक्दा एक्स–रे गर्न आउने बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, प्राधिकरणले ढिलै भएपनि मेसिनलाई आवश्यक पर्ने ट्रान्सफरमर जडान गरिदिएपछि त्यो समस्या समाधान भएको छ ।”
अस्पतालमा आउने बिरामीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै चार लाख बराबरको ५० केभीएको ट्रान्सफरमर उपलब्ध गराइएको विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख पुरुषोतम रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालबाट पटक–पटक माग आएकै हो, कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था थिएन ! तैपनि, जिल्लाबासीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हलेसीमा रहेको ट्रान्सफरमर साटफेर गरेर उपलब्ध गराएका हौँ ।”
विद्युत भोल्ट्रेजकै कारण पुरानो एक्स–रे मेसिन बिग्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको जि.एक्स.आर. डिजिटल एक्स–रे मेसिन गत मंसिरमा अस्पताल ल्याइएको डाक्टर लम्सालको भनाइ छ । विभागले छ महिनाअघि एक्स–रे मेसिन उपलब्ध गराएपनि विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेकै कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको थिएन ।
अहिले अस्पतालमा जडान गरिएको एक्स–रे मेसिन पूर्वी पहाडी जिल्लामध्ये खोटाङमा मात्र भएको डाक्टर लम्सालको भनाइ छ । उक्त डिजिटल एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा आएपछि स्वास्थ्य उपचारमा सहज भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
२०४४ सालमा स्थापना भएको जिल्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति तथा भौतिक सुविधा नहुँदा जिल्लाका अधिकांश बिरामी उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ ।